Ipholisi yoLuhlu lokuthintelwa
Eli nqaku lichaza iseti yeemfuneko ekumele ihlangabezane nazo i-app ukuze ihanjiswe nge-Firefox Marketplace. Ezi mfuneko ziyilelwe ukuzinzisa izidingo zombini zabaphuhlisi nezabasebenzisi bee-app ezisuka kwi-Firefox Marketplace. Abaphuhlisi bafuna iimfuneko ezilungileyo, ezihambelanayo, nezingeyo-draconian abanokwazi ukuzithemba ekwakheni ishishini kuzo. Kwelinye icala, abasebenzisi bafuna isiqinisekiso ukuba ii-app zikhuselekile, ziya kusebenza kwisixhobo sabo, kwanokuba ezi app ziya kwenza le nto bezithe ziya kuyenza. Iimfuneko ze-app ezingezantsi zijonge kuzinziso oluphambili phakathi kwezi zidingo.
Nazi izinto ezilindelweyo ze-Mozilla zokuba luyintoni na kwaye aluyiyo ntoni na uhlolo lwe-app:
Iimpawu ziya kusetyenziswa ngendlela elungileyo, enothando, nengatshintshiyo. Inkqubo yohlolo ayijonganga ekubeni ngumgcini-sango, kodwa indawo yokubamba ethenjiweyo ebonelela ngeengxelo yokuncedisa abaphuhlisi babe nempumelelo ngakumbi.
Abahloli abalilo iqela le-QA! Ngexesha lenkqubo yohlolo, ukhona umntu oya kujonga kulwandiso lwe-app achithe imizuzu embalwa esebenzisa iaplikheyishini njengoko eya kwenza njalo umsebenzisi oqhelekileyo.
Ukuba i-app ayiluphumeleli uhlolo, umphuhlisi uya kunikwa inkcazelo ecacileyo yengxaki efunyenweyo, amanyathelo okuvelisa ngokutsha, kwaye nalapho kunokwenzeka khona, umhloli kumele amalathise kwindawo elungileyo umphuhlisi ngokunikeza ngamakhonkco kumaxwebhu axhasayo afanelekileyo okanye enze izincomo ezingokuba ziinguqulelo zini na ekudingeka zenziwe.
Abahloli abalwenzi ugwebo olungokuba ikhangeleka njani na i-app, kuphela lumalunga nokuba isebenza njani na. Umzekelo, i-app enomhlathi weteksti ebomvu kumva o-orenji ayina kukhatywa ngenxa yokuba imbi, kodwa isenokukhatywa ukuba ayifundeki.
Sisoloko singabaniki ukuthandabuza abaphuhlisi. Ukuba asiqinisekanga ngokuba i-app kumele ikhatywe, abahloli baya kubuza imibuzo phambi kokuba bakhuphe ukukhaba. Ii-app aziyi (ngokwazekayo) kukhatywa ngenxa yeemeko zeqonga ezingaphandle kolawulo lomphuhlisi; nangona kunjalo, sise nokuyibamba imvume ukuba asikwazi ukuyenza isebenze i-app.
Iinkcukacha ezipheleleyo zolwakhiwo lokhuseleko lwe-app zifumanela apha: https://wiki.mozilla.org/Apps/Security
I-app kufuneka isetyenziswe isukela kwindawo efanayo njenge-app.
Ulwandiso lwe-app kufuneka lusetyenzwe njengesihloko se-Content-Type yeaplikheyishini/x-web-app-manifest+json.
Ii-App akumele zisebenzise i-redirects okanye iframes ukulayisha isiqulatho angavumelekanga ukusisebenzisa umphuhlisi.
Iimvume eziceliweyo kumele zibalulwe kulwandiso lwe-app ngeenkcazelo yokuba kutheni na zidingeka iimvume.
Ii-App zamalungelo ohlobo ziya kuba phantsi kohlolo olongezelelweyo, ukuquka uhlolo lwekhowudi, ngenxa yomsebenzi onolunya onokubakho nokulahleka kwedatha yomsebenzisi ngee-API ezinamalungelo.
IPholisi yoKhuseleko lwezinto eziqulathiweyo (CSP) ichaziwe kulwandiso lwe-app ukumisela into enokwenziwa yikhowudi ye-app. Ezesiseko, ukuba ayibalulwanga, ii-app ezingenamalungelo ziyafana nezikweyiphi na iwebhusayithi; ii-app zamalungelo ohlobo zinesiseko esithintelwe ngakumbi. Ingxelo yongqinisekiso eyilwe ekungenisweni kwi-Firefox Marketplace iya kubonisa izityeshelo ze-CSP ezinokubakho kwii-app yakho – nangona kunjalo lumkela oophozithivu bobuxoki nosetyenziso kwiindawo zeelayibhrari zeqela lesi-3 ongazisebenzisiyo.
Umphuhlisi kumele makanxibelelane nepholisi yemfihlelo ngexesha lokungeniswa, kodwa akukho zimfuneko zefomathi nesiqulatho sale pholisi yemfihlelo. Zive ukhululekile ukusebenzisa itempleyithi yepholisi yemfihlelo. Kwakhona jonga izikhokelo zethu zepholisi yemfihlelo.
Naziphi na ii-app ezityeshela iZikhokelo zeSiqulatho ezingezantsi azivumelekanga. Ukuba ucinga unemeko esecicini, nceda ucele inkcazelo kwiqela lohlolo, nkqu nokuba i-app ayikakulungeli ukungeniswa. Sifuna ukukunceda uhlale usendleleni elungileyo, kunokuba uchithe ixesha lophuhliso kwisiqulatho esiya kukhatywa.
Ukusukela kuJanyuwari 2014, zonke ii-app kufuneka zikalishwe kwi-International Age Rating Coalition (IARC). Ukufumana olu kalisho , siya kukukhokelela kuludwe lwemibuzo olufutshane ngelixa lenkqubo yongeniso, kwaye uya kulufumana ngoko nangoko ukalisho. Ulwazi oluninzi ngokumalunga nale nkqubo yohlelo luyafumaneka apha.
Izikrinshothi neenkcazelo ezingeniswe kwi-Firefox Marketplace kumele ziyimele ngokuchanekileyo i-app. Usenokuquka imifanekiso “yokumaketha” 1-2 ebonisa uhambelwano, iifitsha zothelekiso, okanye kungenjalo yandisa umdla, kodwa kumele kubekho nokuba sinye iskrinshothi se-app esebenzayo, ukuze abasebenzisi bakubone kwangaphambili oko bakufumanayo ngenene. Ukuba esinye sezikrinshothi zakho siyi-splash okanye i-launch screen, kufuneka uquke iskrinshothi sendawo yomsebenzi weaplikheyishini yakho.
Kulwandiso lwe-app, i-locale keys kufuneka zihambelane neelokhalizeyishini ezixhaswa yi-app yakho. Ngokunikeza nge-locale key ngesiPholishi, abasebenzisi baya kulindela ukuba i-app yakho ifumaneke ngolo lwimi.
I-ayikhoni ye-app kufuneka ilandelei i-Firefox OS app icons style guide. Yiayikhoni ye-128 x 128 kuphela enyanzelekileyo, kodwa sicebisa iayikhoni ye-512 x 512 (ngeenkcukacha ezininzi, bona i-Icon implementation for apps.) Qaplela ukuba iiayikhoni zingangqukuva, isikwere esineekona ezingqukuva, okanye isikwere, ngokwesikhokelo sesimbo ngasinye.
Olu luhlu luchaza iintlobo zeziqulatho ezingafanelekanga kwi-Firefox Marketplace. Olu luhlu luyabonisa, hayi ngokugqibeleleyo, kwaye lusenokuhlaziywa. Ukuba iaplikheyishini ifunyaniswe izityeshela izikhokelo zeziqulatho, i-Mozilla inelungelo lokuyisusa ngoko nangoko iaplikheyishini kwi-Firefox Marketplace.
Akufuneki mathiriyeli yezinto ezibonisa amanyala, okanye ezibonisa imifanekiso emibi yesondo okanye ububhovu-bhovu.
Akukho siqulatho sixhaphaza amalungelo aye nawuphi na umntu, kuquka ipropati yobungqondi, okanye amalungelo epropati okanye amalungelo emfihlelo okanye asekuhleni.
Akukho siqulatho siyilelwe ukwenzakalisa i-Mozilla okanye abasebenzisi (nje ngekhowudi ye-malicious, iivayirasi, i-spyware okanye i-malware).
Akukho siqulatho singekho semthethweni okanye esiphakamisa imicimbi engekho semthethweni.
Akukho siqulatho sikhohlisayo, silahlekisayo, sobumenemene okanye siyilelwe ukuphisha okanye ukwenza obunye ubusela besazisi.
Akukho siqulatho siphakasa ukungcakaza.
Akukho siqulatho sizixakekisa ngentengiso ngeemveliso okanye iinkonzo ezingekho semthethweni okanye ezilawulwayo.
Akukho siqulatho sixhaphaza abantwana.
Akukho siqulatho sithoba isidima, soyikisayo, sixhokonxa ububhovu-bhovu ngokuchaseneyo okanye esikhuthaza isenzo sokuqala kugwetywe umntu okanye iqela ngokobudala, isini, uhlanga, ubuzwe, imvelaphi ngelizwe, unqulo, ukuzifumana ngokobuni, ukhubazeko, inkolo, indawo elizweni okanye olunye udidi olukhuselweyo okanye okuquka intetho yentiyo.
Akukho siqulatho silahlekisa umsebenzisi ngokwenza isigqibo sokuthenga.
Umhloli kumele akwazi ukusebenzisa iifitsha zokuqala ezisasazwayo ze-app. Iziphene zezihombiso kunye nezinto ezincinci ezingelo ncedo ziya kuxelwa kumphuhlisi, kodwa aziyi kuthintela ukuba ingamkelwa i-app.
I-app akumele ichaphazele ukusebenza okanye uzinzo lwesistim.
Umphuhlisi kumele enze inzame esengqiqweni ukwandisa ubume be-app kwiqonga ekujoliswe kulo. Injongo yale mfuneko kukubamba ukungaphumeleli okucacileyo, okunjengoku:
I-app engeniselwe imobhayile eyisayithi yedesktophu ngokucacileyo.
I-app engoluleki ngokucacileyo kakhulu ukuzalisa isithuba sesikrini (khawufane ucinge nge-app ye-320x480 ethatha nje kuphela ikona ephezulu kwithablethi, esinye isithuba kwisikrini simnyama. Oku akujongwanga kuko ngokuqinisekileyo!)
Le app kumele iphumeze eyeyayo indlela yokunavigeyitha kwaye ingaxhomeki kwibhrawuza ye-chrome okanye iqhosha elingasemva lehadiwe, elingayi kubakho kuso sonke isixhobo.
Umzekelo, i-app iya kukhatywa ukuba umhloli unavigeyitha kwenye indawo ngaphakathi kwi-app kwaye akakwazi ukunavigeyitha abuyele emva. Ii-app AKUKHO sidingo sokufakelwa ibha yeqhosha eqhelekileyo kwii-app zabemi.
Kwi-Firefox OS v1.1 nengaphezulwana, ungongeza ulwandiso lwepropati ye- ye-chrome ukongeza izilawuli zenavigeyishini ezincinci.
Iielementi zenavigeyishini, ezinjengamaqhosha namakhoncho, kumele kube lula ukuzicofa okanye ukuzibetha.
Sithemba ukuba akuyi kunyanzeleka ukuba siyisebenzise, kodwa sinalo ilungelo lokususa ("uluhlu lokuthintelwa") nayiphi na i-app esasazisiweyo efunyaniswe kamva ukuba ityeshele naluphi na ukhuseleko, imfihlelo, okanye iimfuneko zesiqulatho, okanye ii-app ezikwehlisa ngokumandundu ukusebenza kwesistim okanye kwenethiweki. Abaphuhlisi bazokwaziswa ngale meko phambi kokuba i-app ifakwe kuluhlu lokuthintelwa, sizozicingela ukuba ungumhlali oziphatha kakhule ngaphandle sinobufakazi obuthile, kwaye sizokufumana uncedo kusukela kuhloko lwoqhela lohlolo lwe-app ukuqhagamshelana ukuba kwenzeka ntoni kwaye sifumane ukuba ingxaki ilungiswa njani. Imizekalo ethile yeemeko apho uluhlu lokuthintelwa luqinisekisiweyo iquka:
Ukutshintsha isiqulatho ukusukela kwi-Puppy Pictures v1.0 ukuya kwi-Brutal Violence v1.0 (ngaphandle kokuhlaziya ukalisho lwesiqulatho)
Ukungaziphathi kakuhle okukhulu kwe-app kwipesenti enkulu yabasebenzisi — kwehlisa umgangatho womsebenzi wefowuni, kubangela ukuba ifowuni eqale ngokutsha, yenza kubeko ukulahleko kwedatha yabasebenzisi, njalo njalo, apho abasebenzisi bangenako ukuxela ukuba kungenxa kwe-app kwaye apho ayilungiswanga ngokusiqala ngokutsha isixhobo.
I-app esetyenziselwa ukuhlasela inethiweki, njengokwaliwa kwenkonzo esasaziweyo (DDOS).
Izibonelelo ezilandelayo zinikeza ulwazi oluninzi kwinkqubo yohlolo nakubahloli bee-app:
Iimpawu zovavanyo lwaBahloli — eli phepha lichaza uvavanyo oluya kwenziwa ngabahloli be-app kwii-app zakho
Abahloli bee-app — indlela yokuqhagamshelana neqela lokuhlola le-app kunye nokuthabatha inxaxheba kuhlolo lwee-app.
Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, DevonB
Last updated by: mdnwebdocs-bot, Mar 23, 2019, 7:06:10 PM
Other languages: isiXhosa (xh) English (US) (en-US) Afrikaans (af) عربي (ar) বাংলা (বাংলাদেশ) (bn-BD) বাংলা (ভারত) (bn-IN) Deutsch (de) Eʋe (ee) Ελληνικά (el) Español (es) Français (fr) Hausa (ha) हिन्दी (भारत) (hi-IN) Igbo (ig) Italiano (it) 한국어 (ko) Lingála (ln) Malagasy (mg) မြန်မာဘာသာ (my) Português (do Brasil) (pt-BR) Русский (ru) Kiswahili (sw) தமிழ் (ta) Wolof (wo) Yorùbá (yo) 正體中文 (繁體) (zh-TW) isiZulu (zu)